Iindaba-Inkqubo yeGlasi yeBhotile yeeGlasi
Inkqubo yokuvelisa yeBhotile yeGlasi
Makhulu Iindidi zeglasi:
Uhlobo lwe-I-iglasi ye-Borosilicate
Uhlobo lwe-II-Iglasi yeLoda yeLoda
Uhlobo lwe-III - iglasi yeLoda yeLoda
Izinto ezisetyenziselwa ukwenza iglasi zibandakanya malunga ne-70% yentlabathi kunye nomxube othile we-soda ash, ilitye kunye nezinye izinto zendalo-kuxhomekeke kwziphi izakhiwo ezinqwenelekayo kwibatch.
Xa usenza iiglasi zencasa yesoda, iglasi etyhoboziweyo, evuselelweyo, okanye i-cullet, sisixhobo esiphambili esongezelelweyo. Inani le-kilelet esetyenzisiweyo kwi-batch yeglasi iyahluka. I-Cullet iyanyibilika kubushushu obuphantsi obuhlisa ukusetyenziswa kwamandla kwaye kufuna izinto eziluhlaza ezimbalwa.
Iglasi ye-Borosilicate akufuneki iphinde isebenze kuba iglasi ayinakufuma. Ngenxa yeempawu zayo zokumelana nobushushu, iglasi ye-borosilised ayizukunyibilika kubushushu obufanayo njengeglasi yeSoda Lime kwaye iya kutshintsha imbonakalo yombhobho esithandweni somlilo ngexesha lesigaba sokunyibilika kwakhona.
Zonke izinto eziluhlaza zokwenza iglasi, kubandakanya i-cullet, zigcinwe kwindlu ye-batch. Emva koko zixutywe kwindawo enobunzima kunye nokuxuba kwaye ekugqibeleni iphakanyiselwe kwiibatch hoppers ezibonelela ngezixhobo zeglasi.
Iindlela zokwenza iZitya zeglasi:
Iglasi yeGlasi ikwabizwa ngokuba yiglasi etyunjiweyo. Ekwenzeni iglasi evuthuzayo, iiglasi zodaka oluvuthayo ukusuka esithandweni zijongwa kumatshini wokubumba nakwimikhono apho umoya unyanzeliswa ukuba uvelise intamo kunye nobume bebhanti Nje ukuba benziwe, baziwa njengeParison. Zimbini iindlela ezahlukeneyo zokwenza iindlela yokwenza isikhongozeli sokugqibela:
Inkqubo yokuBanda kunye nokuBumba -isetyenziselwa izitya ezinqamlekileyo apho i-parison isenziwa ngumoya ocinezelweyo
Cinezela kunye neNkqubo yokuQhuma-isetyenziselwe iikhonteyina ezinkulu zokugqitywa apho iparison yenzelwe ngokucinezela iglasi ngokuchasene nobumba olungenanto kunye nombhobho wesinyithi
Iglasi yokubamba yenziwa yinkqubo yokudweba eqhubekayo isebenzisa iinkqubo zeDanner okanye zeVello ukufezekisa ububanzi nobungqingqwa obuchanekileyo. Iglasi itsalwa ngaphezulu komgca wenkxaso eqengqelekayo ngumatshini wokuzoba.
Inkqubo yeDanner -iglasi iqukuqela ivela kwiziko lomlilo kwimbonakalo yendlela yeribhoni
Inkqubo yeVello -iglasi ivela kwiziko elixela kwangaphambili kwisitya esitywiniweyo
Inkqubo yokuFakelwa kweGlasi ye-Blown
Inkqubo yokuBlowa kunye nokuBumba - umoya oxinzelelweyo usetyenziselwa ukwenza i-gob ukuba yiparison, ethi iseke intamo ukugqitywa kwaye inike i-gob imilo efanayo. Iparison ke iphoselwe kwelinye icala lomatshini, kwaye umoya usetyenziselwa ukuwuvuthululela kwisimo esifunekayo.
Cinezela Inkqubo yokuQhuma- isixhobo sokufakelwa kuqala sifakwa kuqala, emva koko umoya ulandele ukwenza i-gob kwi-parison.
Ngasihlandlo sithile le nkqubo yayiqhele ukusetyenziswa kwizitya ezibanzi zomlomo, kodwa ngokongezwa kweNkqubo yokuNceda iVuthium, ngoku inokusetyenziswa kwizicelo ezinomlomo omxineneyo.
Ukomelela kunye nokusasaza yeyona nto ifunekayo kule ndlela yokwenza iglasi kwaye kuvumele abavelisi "ukukhanya" izinto eziqhelekileyo ezifana neebhotile zebhiya ukugcina amandla.
Imeko -akunandaba nokuba yeyiphi na inkqubo, nje ukuba izitya zeglasi evuthuzayo zenziwe, izikhongozeli zilayishwe kwi-Lehr e-Annealing, apho amaqondo obushushu abuyiselwa kuwo ukuya kuthi ga malunga ne-1500 ° F, emva koko ancitshiswe kancinci ukuya ngaphantsi kwe-900 ° F.
Oku kuphinda kusebenze kwaye kuphole kancinci kuphelisa uxinzelelo kwizikhongozeli. Ngaphandle kweli nyathelo, iglasi ibiya kutyhoboza ngokulula.
Unyango oluphezulu -Unyango lwangaphandle luyasetyenziselwa ukuthintela ukubaleka, okwenza ukuba iglasi ithambekele ekwaphulweni. Lo mgaqo wokudibanisa (ngokwesiqhelo umxube wepolyethylene okanye i-tin oxide) uyatshizwa kwaye uhlangana kumphezulu weglasi ukuze wenze i-tin oxide coating. Oku kuhlanganisa kuthintela iibhotile ekunamatheleni komnye komnye ukuze kuncitshiswe ukwaphuka.
I-tin oxide coating isetyenziswa njengonyango olushushu olushushu. Ngonyango lokuphela olubandayo, amaqondo obushushu ezitshixo ancitshiswa abe phakathi kwama-225 kunye nama-275 ° F ngaphambi kokufakwa. Oku kuhlanganiswa kunokuhlanjwa kuphele. Unyango lokuGqibela ngokuTsha lufakwe ngaphambi kwenkqubo yokuphina. Unyango olusetyenziswe ngale ndlela luyachaphazela kwiglasi, kwaye alunakuhlanjwa luvuleke.
Unyango lwangaphakathi -Ingaphakathi yoNyango lwangaphakathi (IFT) yinkqubo eyenza i-Type III yeglasi kwi-Type II yeglasi kwaye ifakwa kwiglasi ukuthintela ukuqhuma.
Uvavanyo lomgangatho -Ukupheliswa komgangatho oshushu kubandakanya ukuvavanya ubunzima bebhotile kunye nokujonga ubungakanani bebhotile ngomgangatho ongahambiyo. Emva kokushiya ukuphela kubanda kwe-lehr, iibhotile emva koko ziya kugqitha koomatshini abahlola ngombane ababona ngokuzenzekelayo iimpazamo. Oku kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho: kuhlolo lobungakanani bodonga, ukujonga umonakalo, ukujonga ubungakanani, ukujonga ukutywina komphezulu, ukuskena kodonga olusecaleni kunye nokuskena okusekwe.
Ukuze ufunde ngakumbi malunga neLebhu yeGlasi yeLebhu kunye nendlela yokuHlola ukuPakisha iiglasi, nceda ucofe apha ukufunda ngakumbi kwaye ukhuphele isikhombisi sokubonisa ukuba ufuna okanye ungadibani nesiphene.
Imizekelo yokuBlowa kunye neziqulatho zeBlow
Iibhotile ezijikeleze iBoston
Iibhotile zeesampulu zeoyile
Imizekelo yoThintelo kunye neziqulatho
Iibhotile ezibanzi zoMlomo
Iibhotile zesikwere zaseFrance
IiBhotile eziPhakathi eziPhakathi
Iinkqubo zeTubular Glass zokwenziwa
Ubungakanani bokubhula ukusuka kububanzi obuyi-1,6mm ukuya kuma-66.5mm
Ukuzoba amaqondo afikelela kuma-400m umzuzu ngokobukhulu obuncinci
Iglasi iqukuqela ivela kwiziko elivayo ngaphambili kwimo yembambo, iwela kwicala elingasentla lomkhono otyholayo, ophathwe kumngxunya ojikelezayo okanye isiphango.
Umqolo ubusongelwe engxoweni ukuze kwenziwe ungqameko olugudileyo lweglasi, oluhamba olwesibini kunye nengubo yentsimbi.
Ityhubhu ke itsalwa ngaphezulu komgca wenkxaso eqengqelekayo ngomatshini wokuzoba okwi-120m kude.
Ubungakanani betyhubhu bugqitywa njengoko iglasi iphola kwindawo yayo yokuseka kwindawo engasekelwanga phakathi kwendawo yokuqhula kunye nomqengqeleki wokuqala.
Iglasi iqukuqela ivela kwiziko lomlilo ngaphambili kwisitya apho ibekwe khona imore ethe nkqo okanye intsimbi ejikelezwe sisangqa se-orifice.
Iglasi ihamba phakathi kwindawo yentsimbi phakathi kwentsimbi kunye nomsesane ohamba ngaphezulu komgca wokuqengqeleka kumatshini wokuzoba ukuya kumgama oyi-120m.
I-Tube Draw umgangatho woLawulo
Nje ukuba iityhubhu zigqityiwe, ziye zenziwe kuvavanyo oluninzi kunye nokuhlolwa ukuqinisekisa ukuba ziyahambelana nemigangatho esemgangathweni. Ukuhlolwa okubonakalayo kuqhutywa yinkqubo yekhamera ephezulu, yesisombululo esiphezulu ekususeni isiphene. Nje ukuba yenziwe kwaye isikwe kwimo echanekileyo, ubukhulu bayo buqinisekisiwe.
Imizekelo yeGlasi yokuKhwela
Ixesha lokuposa: Jun-04-2020